यहाँ नेपाली २५ रुपैयाँमा भाडामा पाइन्छ गर्लफ्रेण्ड, मान्नुपर्छ मात्रै एउटा शर्त , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यहाँ नेपाली २५ रुपैयाँमा भाडामा पाइन्छ गर्लफ्रेण्ड, मान्नुपर्छ मात्रै एउटा शर्त
एजेन्सी। हामी सानो हुँदा धेरैले प्रश्न सोध्थे ‘ठूलो भएर के बन्छौ ?’ हामीमध्ये धेरैले डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट लगायतका जवाफ दियौं । तर आजभोलि संसारमा यस्ता यस्ता काम सुरु भएका छन् जसको बारेमा केही वर्ष पहिले कल्पना पनि गरिँदैनथ्यो । जागिरको यस्तै विचित्र ट्रेण्ड हाम्रो छिमेकी देश चीनमा चलिरहेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार चीनको हुआन शहरमा एक शपिङ सेन्टरले १५ युवतीलाई भाडामा उपलब्ध गराएको छ । यहाँको वाइटेलिटी सिटी शपिङ कम्प्लेक्सको मुख्य द्वारमा अहिले कैयौं युवतीहरु उभिएका भेटिन्छन् । यीमध्ये तपाइँ जसलाई चाह्यो रोज्न सक्नुहुन्छ बदलामा तपाइले झण्डै नेपाली २५ रुपैयाँ बराबर तिर्नुपर्छ । यतिमा तपाइले माफूलाई मन परेकी युवतीसँग २० मिनेट बिताउन सक्नुहुन्छ । यस क्रममा तपाइँले ती युवतीसँग शपिङ, जञ्च वा डिनर गर्न सक्न्ुहुन्छ । यो सपिङ सेन्टरले यो अबको सबैभन्दा ठूलो शपिङ ट्रेण्ड बन्ने दावी गरेको छ । यसको लागि तपाइले एउटा शर्त भने मान्नुपर्ने हुन्छ त्यो हो तपाइँले ती युवतीलाई छुन भने पाउनुहुने छैन ।